खान खाने मुखनै छैन यी बालकको :३ बर्षीय बालकको यस्तो कारुणिक अबस्था,बोल्न पनि सक्दैनन् – PathivaraOnline
Home > समाचार > खान खाने मुखनै छैन यी बालकको :३ बर्षीय बालकको यस्तो कारुणिक अबस्था,बोल्न पनि सक्दैनन्
अर्घरखांचीका ३ बर्षका बालक बिवेक अर्यालको यो दर्दनाक अवस्था देख्दा सबैको मन रुन्छ । जन्मेको केहि दिनदेखि बिवेकको नै जिब्रो सुनिन थाल्यो..त्यो बढ्दै गयो..अहिले यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था छ । राम्ररी बोल्न सक्दैनन् बिवेक..बिचरा कति रहर हुंदो हो..आमा बाबा भन्ने । त्यो पनि भन्न सक्दैनन् । अन्तर्वार्ताकै बिचमा जिब्रो दुखेर बिवेक रोईरहंदा सबैको मन रोयो। अन्न खान सक्दैनन्, झोलिलो दाल र दुधको साहारामा बांचेका छन, बिवेक् ।
मुखबाट बाहिर निस्केको जिब्रोभरी खटिरा छ..रोग के हो ? भारतसम्म पुग्दा पनि डाक्टरले पत्ता लगाउन सकेनन् । यो भिडियोलाई हेर्ने जत्ति सबैले लाईक गरौं । बिवेकलाई आफ्नै छोरा नाती र भाई सक्झेर उनको यो भिडियो सबैले शेयर गरौं । बिवेकको उपचारमा ५० लाख खर्च भैसक्यो।बिदेशको राम्रो हस्पिटलमा लगेर उपचार गरे, बिवेकको उपचार सम्भव छ ।उहालाई सहयोग गरौ:
आमाले जागिर लगाईदिन्छु भनेर लगेको भोलि पल्टै छोरीको शव मकै बारीमा, सम्झेर भक्का नो छोडेर रोइन दिदि !
२७ बर्ष पछाडी भाइरल भएपछि उजेली मिडियामा,८ बर्षको उमेरमा बाल बिबाह गर्दा स्कुलबाट निकालियो भन्दै रोईन अन्तरबार्तामा